On1.click | Dictionary.com
... စ် မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Dictionary.com တွင် ပါဝင်သော အကြ...
မေ ၁၄၊ ၁၉၉၅; ၂၆ နှစ် အကြာက (၁၉၉၅-၀၅-14)
Dictionary.comသည် အွန်လိုင်းအဘိဓာန်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ဒိုမိန်းကို ၁၉၉၅ ခုနှစ် မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Dictionary.com တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် Random House Unabridged Dictionary ၏ နောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းပေါ်တွင် အခြေတည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။  နောက်ထပ် ထပ်ဖြည့်သောအကြောင်းအရာများမှ Collins English Dictionary၊ American Heritage Dictionary နှင့် အခြားသော အဘိဓာန်တို့မှ ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
Dictionary.com ကို ဘရိုင်ယန် ကာရီဂါနှင့် ဒန်နီယယ် ဖီရေးရိုတို့မှ Lexico Publishing ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် Thesaurus.com နှင့် Reference.com တို့နှင့်အတူ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဝဘ်ဆိုဒ်လွှတ်တင်စဉ်အချိန်က ဤဆိုဒ်သည် ယုံကြည်ဖွယ်ရာ ကိုးကားမှုပြုနိုင်သော ဆိုဒ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Lexico Publishing Group ကို Ask.com( IAC company) မှ ရယူခဲ့ပြီး Dictionary.com(LLC) ကို အမည်ပြောင်းလဲခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် IAC သည် Dictionary.com နှင့် Thesaurus.com တို့ကို Rock Holdings သို့ရောင်းချခဲ့သည်။ ရောင်းခဲ့စဉ်အချိန်က Dictionary.com သည် ဝဘ်ဆိုဒ်များအား ခြေရာခံခြင်းကို ပြုလုပ်သည့် SimilarWeb ၏ အဆိုအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လူသုံးအများဆုံးသော ဝဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ထိုဆိုဒ်၌ စကားလုံးရှာဖွေသူ ၅.၅ ဘီလီယံခန့် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။
↑ Dictionary.com WHOIS, DNS, & Domain Info - DomainTools။
↑ Herman၊ Barbara (May 12, 2015)။ Deep Web, Revenge Porn And Microaggression Are Just Some of Dictionary.com's Latest Additions။
↑ Treisman၊ Rachel (2020-09-03)။ Dictionary.com's Largest Update (Re)defines Thousands Of Words, Focusing On Identity။
↑ Perlman၊ Merrill (April 29, 2019)။ Dictionaries recently added more than 1,500 words. Here are some new entries။
↑ Lexico, Dictionary.com Being Acquired By Ask.com; Price In $100 Million Range။ Gigacom။
↑ Alpert၊ Lukas (March 26, 2018)။ Defining Moment for Dictionary.com - It's For Sale။
↑ Auchard၊ Eric။ "Ask.com closes acquisition of Dictionary.com"၊ Reuters၊ July 4, 2008။
↑ Amended and Restated Operating Agreement of Dictionary.com, LLC။ U.S. Securities and Exchange Commission (July 17, 2008)။
12Reindl၊ JC (November 15, 2018)။ Cleveland Cavaliers owner Dan Gilbert just dipped into the online dictionary, thesaurus business။
↑ Stevens၊ Heidi (November 11, 2015)။ 'Mx.' instead of 'Mr.' or 'Mrs.?' It's in the dictionary now။